EVENTS AND MOVEMENTS ၂၄ နှစ်မြောက် ကိုဘုန်းမော်ကျဆုံးခြင်း ( မြန်မာပြည် လူ့အခွင့်ရေးနေ့ ) အထိမ်းအမှတ် ဆန္ဒပြပွဲ
Burma Democratic Concern (BDC) is organising the Burma�s Human Rights Day Demonstration on 13 March 2012 from 12:30-13:30 in front of the Burmese embassy in London, UK.
Burma�s Human Rights Day
Last 23 years ago, Burmese people spearheaded by the young students showed their bravery calling for change so as to restore democracy and human rights in Burma. The then military dictator General Ne Win responded by opening fire on unarmed peaceful protesters killing thousands. Phone Maw is one of the very first students who died for the country defying military suppressions which trigger nation-wide mass uprising resulting in successfully toppling three decades long one-party dictatorship in Burma. During the mass uprising, thousands of people died as the result of violent military crack-down. Since then, Burma democracy movement has been honouring Phone Maw and fallen heroes on every March 13, as the Burma�s Human Rights Day.
Burma Democratic Concern ( BDC) မှ ကြီးမှူး၍ ကိုဘုန်းမော်ကျဆုံးခြင်း ( မြန်မာပြည် လူ့အခွင့်ရေးနေ့) ဆန္ဒပြပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ တက်ရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ၁။ မြန်မာပြည်တွင်း ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်ရေး အပြည့်အဝရရှိရေး။
၂။ ဘက်မလိုက်သော တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု့ရှိရေး။ ၃။ ပြည်တွင်း NLD စာရင်းအရ ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ချွင်းချက်မရှိ လွတ်ပေးရေး။ ၄။ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးရေး။
၆။ လွတ်မြောက်လာသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ နိုင်ငံကူးလတ်မှတ်ထုတ်ပေးရေး နှင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာစည်းရုံးခွင့်ပြုရေး။ ရက်စွဲ။ ။ ၁၃၊ ၀၃၊ ၂၀၁၂။ ( အင်္ဂါနေ့) အချိန်။ ။ ၁၂း၃၀ မှ ၁၃း၃၀။